Herintaona Mahery Taty Aoriana, Misoroka Ahitra Ao Amin’ny Toeram-ponenana Nasiana Azy Ao Myanmar ireo Niharan’ny Fihotsahan’ny tany · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 23 Jona 2017 18:37 GMT
Diovin'ireo mponina ao amin'ny Tanàna Vaovao ilay faritra kely mba hambolena katsaka sy ovy. Ny taona teo aloha, lanin'ireo biby na potika avokoa ny sakafo nambolen'izy ireo. Sary sy pikantsary an'i Brennan O'Connor/The Irrawaddy
Ity lahatsoratr‘i Brennan O'Connor ity dia avy amin'ny Irrawaddy, tambajotram-baovao tsy miankina iray ao Myanmar, ary navoakan'ny Global Voices mba ho ampahany amin'ny fifampizaràna votoatiy.
Nitarika fihotsahan'ny tany tamin'ny taona 2015 ny tondradrano goavana tao andrefan'i Chin State, iray amin'ireo faritra mahantra indrindra ao Myanmar. Tao Hakha renivohitra, mponina an'arivony no nakisaky ny fihotsahan'ny tany nanafoana ny antsasaky ny faritra azo volena tao an-tanàna.
Teo ho eo amin'ny enim-bolana taorian'ilay loza, nanomboka nanome trano fonenana ho an'ireo tràdoza ny fanjakana, tao amin'ny faritra iray vaovao atao hoe “Hakha Thar” amin'ny fiteny Hakha, na “New Hakha” amin'ny fiteny anglisy. Azo noharina tsotsotra amin'ny hoe Tanàna Vaovao izy io, miorina an-kilaometatra maro miala eo amin'ny tanàna afovoany.
Saingy, taona iray taorian'ny fametrahana azy ireo, vao ny herinaratra fotsiny no azon'ireo mponina fa tsy mbola manana rano mikoriana. Tsy maintsy miantehitra amin'ny fanangonana ranon'orana sy ireo fanaterana ataon'ireo vondrona mpanampy ao an-toerena izy ireo.
Niorina teo amin'ny faritra nisy ny fihotsahan'ny tany ny tranon'i Sang Vel. Nafindra tao amina toby iray famonjena izy sy ny fianakaviany izay nipetrahany nandritra ny valo volana. Fotoantsarotra tamin'izany, nohazavainy ny fomba nilain'izy ireo natao mba hahazoana ireo firakotra mafana hiarovana amin'ny hatsiaka mangirifiry nandritra ny ririnina. Maivana izy ireo tamin'ny fialàna ny toby ary nifindra tamina trano vaovao. Saingy rehefa niaina tao amin'ny Tanàna Vaovao nandritra ny taona iray tsy misy izay mba tombony fototra, vao maika niha-sorena ny mpianakavy.
Mitatao amin'i Hakha, miorina ao amin'ireo tendrombohitra avo indrindra ao an-tanàna ilay Tanàna Vaovao. Mitovy avokoa ny ankabeazan'ireo trano: kely, taotrano efamira narafitra haingana tamin'ireo hazo mirary sy fanitso. Mbola tsy vita rarivato ireo lalana mampifandray azy ireo. Mitondra tafiotram-bovoka ao amin'ny Tanàna Vaovao ny rivotra mitsoka matetika mamakivaky an'i Hakha.
Sahala amin'ny ankamaroan'ireo mponina, tsy an'asa ihany koa i Sang Vel sy ny vadiny Dan Tlang Ti Phul. Talohan'ny fihotsahan'ny tany dia nivarotra legioma tamin'ireo mpivarotra eo an-toerana izy ireo. Saingy ny vola azony taloha dia tena kely raha oharina amin'ny saran-dalana amin'ny fitateram-bahoaka ao an-tanàndehibe. Ho solon'izany, miankina amin'ny zanany lahy izy ireo, izay mijanona tanteraka any afovoan-tanànan'i Hakha miaraka amin'ireo havany, mitsinjara ireo entana amin'ilay kodiarantelon'ny fianakaviana.
Nandritra ny fivoriambahoakan'ny tanàna ny faran'ny taona 2016, nanome toky ny governemantan'i Chin State fa hisy vola avy amin'ny tetibolan'ny taona 2017 ho atokana hampiasaina mba hamenoana ireo asam-bahoaka tsy tontosa hatramin'ny farany tao amin'ny Tanàna Vaovao. Misy marika ahitàna izao hoe manomboka hita izy io. Tsy ela akory izay, nahazo jiro ireo mponina ao, vita ny siniben-drano goavana iray ary andalana ny asa fanamboaran-dalana.
Kanefa, tsy misy finiavana mikasika ireo asa fivelomana ho an'ireo mponina nambara. Namboly avokoa ny ankamaroan'ireo tràdoza tamin'ilay fihotsahan'ny tany talohan'ny nisehoan'ny loza, nefa faritra goavana tamin'ireo tany novolena no voatototra.
Rehefa avy niatrika ireo fahasahiranana amin'ny tsy fahitana asa raikitra tao an-tanàna afovoany — efa vitsy rahateo ny asa talohan'ireo tondradrano — ireo izay tsy simba ny taniny dia niverina tany amin'ireo famboleny, farafaharatsiny tao anatin'ny herinandro. Kanefa, mbola atahorana hihotsaka ny faritra mandritra ny fotoanan'ny orana amin'ity taona ity.
Mpiasa miandry ny handoavana ny karamany tamin'ny fandavahana farihy iray izay tototra nandritra ny fihotsahan'ny tany tamin'ny taona 2015. Hampiasaina mba handrasaina orana hahazoana rano madio ao an-tànana ilay farihy. Sary sy pikantsary an'i Brennan O'Connor The Irrawaddy
Miorina any amin'ireo tandavan-tendrombohitra mideza mitatao amin'i Hakha, mijanona ho tsy vita ny Tanàna Vaovao herintaona mahery hatramin'ny nanamboarana azy. Sary sy pikantsary an'i Brennan O'Connor The Irrawaddy
Trano anjatony sy antsasaky ny tany fambolena no ravan'ny fihotsahan'ny tany tao Hakha. Vokatry ny fahaverezan'ireo tany azo volena, maro ireo legioma tsy maintsy vidiana amin'ny alalan'ny fiarabe avy any amin'ireo tanàna afovoany hafa ao Chin State. Mitarika fiakaran'ny vidin'ireo sakafo ny saran'ny fitaterana. Sary sy pikantsary an'i Brennan O'Connor The Irrawaddy
Nanamboatra trano manodidina ny 1.000 eo ho eo ao amin'ny Tanàna Vaovao ny fanjakana ho an'ireo niharan'ny fihotsahan'ny tany. Sary sy pikantsary an'i Brennan O'Connor The Irrawaddy